Garawe iyo Xamar oo Geesaha Is Dhaafsaday – Rasaasa News
Nairobi, April 29, 2013 Madaxwaynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wada xaajood u jooga Puntland mudo labo maalmood ah, isaga oo ay ismari la,a yihiin madaxwayanaha Puntland madaxwayne Faroole.
Puntland waxay dhacdaa badhtamaha dalka Somalia, waxayna mug wayn ku leedahay go,aamada siyaasadeed ee dalka Somaliya. Puntland waxay qayb libaax ku lahayd heshiisyadii dalka Somaliya kaga baxay ku meel gaadhka, waxaana lagu qabtay labadii shir ee lagu magacaabay Garawe 1 iyo 2 ee lagu ansixiyey dastuurka ku meel gaadhka ah iyo doorashdii dawlada Somaliya.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, oo lagu sheego in uu yahay nin ku cusub saaxada siyaasada dalka Somaliya, ayaa waxaa la shaqeeya dad ku cusub laftigoodu siyaasada.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud oo mudo 8 bilood ah, madaxwayne ka ah Somaliya, ayaan marna cag dhigin Puntland. Maqnaanshihiisa ayaa runtii wax wayn u dhimay hore u socodka siyaasada dalka Somaliya, waayo waxaa muuqatay biyo isu cantuugsanaan u dhaxaysa Garawe iyo Muqdisho.
Dawlada federalka Somaliya ayaan kaliya indhaha ka lalin Puntland, balse indhaha ka lalisay dalalka dariska oo runtii lug wayn ku leh dalka Somaliya kana dambeeyey dhismaha dawlada maanta.
Dawlada Xasan Sheekh Maxamuud, waxay qaadatay arimo siyaasadeed oo ayna kaligeed go,aankooda lahayn, kuwaas oo haatan xalkooda ay u joogo Garawe. Sida; gooni isutaaga Somaliland, Maamul u samaynta Jubaland, ka horimaadka dastuurka federalka Somaliya iyo diidmada dalalka dariska.
Waxaa ay dawlada Ingriisku sugaysaa in May 7, 2013 shir loogu qabto dalka Somaliya London, arintaas oo uu xagal daaciyey madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, ka dib kolkii ay sidii labo dawladood heshii ku kala saxiixdeen Somaliya iyo Somaliland.
Somaliland oo qayb ka hayd kulanka London way diiday waxayna tidhi “Somaliland waa dal madaxnaan waanakan heshiiskii aan la galay dalka Somaliya.” Waxaa iyana diiday ka qayb galka shirka London Puntland.
Waxaa si deg deg ah Muqdisho u tagay xoghayha arimaha dibada Ingriiska, waxaana uu madaxwaynaha Somaliya u sheegay in shirka loo qaban doono beelaha Somalida iyo dawlada Somaliya kaliya waayo waxaad ka shaqaysay in ayna ka soo qayb galin maamuladu shirka London.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, waa arinkaas midka uu Garawe u joogo, mana muuqato in Puntland ay sina u aqbali doonto tuugmada madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud. Siyaasiyiinta reer Puntland waxay aaminsan yihiin in ayna xeer dhiga siyaasiyiinta reer Muqdisho, bixin abaal gudka ay gashay Puntland.
Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu gacamo madhan galabta kala tago Garawe.
Dawlada Soomaaliya oo Laga Cabsanayo in ay Dagaal Hor Leh Galiso Dalka